ကဘူးလ် စစ်ဆေးရုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် သေဆုံးသူ ၁၅ ဦးထက်မနည်းရှိ ၊ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးများ ဆက်လုပ်နေ - Xinhua News Agency
ကဘူးလ် စစ်ဆေးရုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် သေဆုံးသူ ၁၅ ဦးထက်မနည်းရှိ ၊ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးများ ဆက်လုပ်နေ
ကဘူးလ် ၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ရှိ စစ်ဆေးရုံတစ်ခုသည် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်က အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၁၅ ဦးသေဆုံးကာ အခြား အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း ပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုက ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။“ အနည်းဆုံး ၁၅ ယောက်သေဆုံးသွားတယ် ၊ အားလုံးက အစ္စလာမ်မစ်စော်ဘွားနိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါ ၊ ကုတင်-၄၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာ ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း အများအပြား ရှိပါတယ်” ဟု 1TV ရုပ်သံသတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ရှိ စစ်ဆေးရုံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် မီးခိုးလုံးများထွက်ပေါ်နေသည်ကို အဝေးမှ မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်သူများထဲမှ တစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း နှင့် ဆေးရုံထဲပိတ်မိနေသည့် ဒုတိယမြောက် တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ဦးကို သုတ်သင်နိုင်ရန်အတွက် နယ်မြေရှင်းလင်းရေးအစီအစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သတင်းဌာနက ဆိုသည်။
သေနတ်သံများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁ နာရီခန့်တွင် ကဘူးလ်မြို့ရှိ စစ်ဆေးရုံအနီးတွင် ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း အာဖဂန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Qari Sayed Khost က ပြောကြားခဲ့သော်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ရှိ စစ်ဆေးရုံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ဒဏ်ရာရသူများအား ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ ကုတင်-၄၀၀ ဆံ့စစ်ဆေးရုံကြီးသည် ကဘူးလ်မြို့အမှတ် ၁၀ ရဲတပ်ရင်းနယ်မြေအတွင်းတည်ရှိပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အဓိက စစ်တပ်ဆေးရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းဆေးရုံသည် စစ်သားများ နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကို ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးကုသပေးနေသော ဆေးရုံဖြစ်သည်။
သေနတ်ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယင်းနေရာ၌ ပေါက်ကွဲမှုကြီး နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု အနီးအနားတွင် နေထိုင်သူများက ပြောကြားခဲ့ပြီး လူနာတင်ယာဉ်များက သေဆုံးသူများ နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးရုံမှ စတင်သယ်ဆောင်သွားကြောင်းလည်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ရှိ စစ်ဆေးရုံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားရာတွင် သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသော အရေအတွက်ထက် သေဆုံးသူ ဦးရေမှာ ပိုမိုများပြားနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အဖွဲ့ကမျှ ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ သို့သော်လည်း အာဖဂန်နိုင်ငံတွင် ယခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ခိုက်မှုများကို သဘောထားတင်းမာသည့် အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော်အုပ်စု(IS)က ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
At least 15 killed in attack on Afghan hospital as cleanup operation continues
KABUL, Nov.2(Xinhua) — At least 15 people have been killed and several others wounded inaterrorist attack onamilitary hospital in Kabul on Tuesday,alocal TV channel reported.
“At least 15 people, all security personnel of the Islamic Emirate, have been killed and numerous others injured following the terrorist attack on the 400-bed hospital,” 1TV reported in its news bulletin.
One of the attackers had been killed andacleanup operation was going on to eliminate the second attacker who remained inside the hospital, the media outlet reported.
A bomb blast rocked near the military hospital in Kabul at around 1:00 p.m. local time followed by gunshots, said spokesman for the Interior Ministry Qari Sayed Khost, who didn’t provide more details.
The 400-bed military hospital in the Police District 10 of Kabul is the main army hospital in Afghanistan that provides medical treatments to military personnel and their families.
Locals close to the site said that two explosions hit the area followed by gunshots, and ambulances began taking out bodies and those wounded to health centers.
The number of casualties, according to locals who declined to be identified, is higher than that reported by the media.
No group has claimed responsibility for the deadly attack. However, the hardliner Islamic State group has in the past claimed such attacks in Afghanistan.
(1) Emergency responders carry an injured person atabomb blast scene in Kabul, capital of Afghanistan, Nov. 2, 2021. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua)
(2) Photo taken on Nov. 2, 2021 shows smoke rising fromabomb blast site in Kabul, capital of Afghanistan. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua)
ရုရှားနိုင်ငံ လုံခြုံရေးအကြီးအကဲ နှင့် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ မော်စကိုမြို့၌ တွေ့ဆုံ
LEGO ကစားစရာအရုပ်လုပ်ငန်းစုကြီးက တရုတ်နိုင်ငံ၌ အောင်မြင်မှုကြီးမားစွာရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်မည်
အမေရိကန်၏ ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ရပ်ကို အာဖဂန်ပြည်သူများ လမ်းပေါ်ထွက် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
အာဖဂန်ကြားဖြတ်အစိုးရက နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းပေးရန် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်သို့ တောင်းဆို